अर्थमन्त्रीको ज्वाइँ नै बिचौलिया ! चकलेट र चुईँगममा अरबौंको सेटिङ – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अर्थमन्त्रीको ज्वाइँ नै बिचौलिया ! चकलेट र चुईँगममा अरबौंको सेटिङ
अशोकशरण अधिकारी, काठमाडौं । नयाँ बजेट घोषणासँगै भएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जोडिएका समाचार बाहिरिएका छन् । यसअघि पनि उनी विभिन्न व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा रुमल्लिएको समाचार आएका थिए । गभर्नर छँदा समेत खतिवडाका कामहरु विवादित बने । आफू नजिककालाई नियम, कानुनको छिद्र वा जस्केलाबाट काखि च्याप्ने, बिरोधीलाई हात धोएर पछिलाग्ने उनका विशेषता धेरैवटा निर्णय र व्यवहारले पुष्टि गरेका छन् ।
व्यापारिक घरानाको स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न र गरेपछिको ‘लाभ’ ग्रहण गर्न विश्वासिलो सेटिङ नबनाउँदा धेरैजना मन्त्री र उच्चपदस्थको गोप्य सूचना बाहिरिएकोमा खतिवडा सचेत थिए । त्यसैले उनी मन्त्री बनेकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंक, बिराटनगरमा रहेका कनिष्ठ अधिकृत तथा छोरीज्वाईं रामशरण खरेललाई ठाडो निर्देशनमा मन्त्रालय झिकाए । निकै आलोचना भएपछि गत साउन १ गते बैंक फर्केका खरेललाई लकडाउनबीच मन्त्रीले बैशाख पहिलो साता पुनः मन्त्रालयमा झिकाए ।
सेटिङमा ज्वाईं प्रयोग गर्नुको अर्को सुझबुझपूर्ण कारण पनि खुलेको छ । गभर्नर छँदा कनिष्ठ हुँदाहुँदै ज्वाईंलाई दुई वर्षको लागि अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पठाएको फाईदा अहिले देखिएको छ । काम फत्ते भएपछि व्यापारी तथा व्यवसायीले ज्वाईं खरेल तथा छोरीको अमेरिकास्थित बैंक खातामा डलरमा जम्मा गर्ने गरिएको पनि उच्चस्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्रीपछि अमेरिकाको राजदूत बन्न खोज्नुले समेत खतिवडाको ती खातामा रहेको रकम व्यवस्थापन गर्ने अभिलाषा प्रमुख देखिन्छ ।
Source: reporters nepal